hoo!haa!! – Page 22 –
Taa bu afor, afor Uvume, afor igwe ogidi, afor Nanka,Afor ogbu,afor Nnobi dwgz. Afor m na-azu taa bu afor Uvume, agara izuta mgbaduga, ojoko, abacha, mmanu ncha, akwukwo nri, dwgz. Esi obodo di iche iche dika Umunze, Ndikelionwu, Ajali, Akpu dwgz abia ahia ahu. Nke taa bu ndi Akwa kachaRead More →
I lezie anya, ihe ndị ụfọdụ na-eme mgbe Chukwu Abịama kechara elu n’ala, anaghịkwa emezi oge ugbua. Eleghị anya, n’ihi oke ọchịchọ na ka ahụtachaa ndị mmadụ. Ndigbo kwuru ya hoo! haa!! na ọ bụ ka ahụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n’isi. Na mbụ, ịrị elu bụ iheRead More →
N ubochi taa n’erimeri ndi kIgbo, anyi ga amu ka esi ete ofe onugbu. Onugbu bu nnukwu ofe n’ala Igbo kachasi na mpaghara steeti Anambra. Akwukwo onugbu na ama Mma nke ukwuu na aru na agwo kwa otutu ori Ngwa nri e ji Ewi ofe onugbu(recipe) Ede, ogili akwukwo,anu Okporoko,azuRead More →
uju nwanekezie on ỤMỤ NNỤNỤ/ỤMỤ ARỤRỤ(Insects)
admin on ỤMỤ NNỤNỤ/ỤMỤ ARỤRỤ(Insects)
uju nwanekezie on ILU BANYERE AMAMIHE, NZUZU N’AGHỤGHỌ
ILU BANYERE AMAMIHE, NZUZU N’AGHỤGHỌ